मालागिरी तिन बहस - मालागिरी समाचार
२ श्रावण २०७५, बुधबार ११:०२
Home›अन्य›बकश›मालागिरी तिन बहस
मालागिरी तिन बहस
– भवानी न्यौपाने ‘भावना’, विगत एक दशकभन्दा धेरै पहिलेबाट साहित्य क्षेत्रमा लागी नेपाली साहित्यको संरक्षण गर्दै आउनु भएकी तुलसीपुरकी नारी श्रष्टा भाव नासँग गरिएको कुराकानीको अंश मागिरी बहसमा ।
१. साहित्य क्षेत्र नै किन रोज्नुभयो अनि किन ?
– साहित्यमा सानै देखि जिज्ञासा थियो एउटा साहित्यिक परिवारमा जन्मिएकोले, कहिलेकाहीँ विद्यालय एवम् अन्य ठाँउमा भाग लिँदा प्रथम, द्वितीय स्थान आउँथे । साहित्यमा समाहित भएर लागेको दश वर्ष भयो । यहीँ नै मेरो आधार भएको छ, म आफुलाई साहित्य जगतमा हराउन चाहान्थे सानैदेखि, त्यसकारण मैले यो क्षेत्र रोजेको हुँ ।
२. साहित्य के हो जस्तो लाग्छ ? कति किताब बजारमा आए कति आउँदैछन् ?
– साहित्य भनेको जीवन भोगाइ, सामाजिक घटना, राजनीतिक अवस्था र आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको अनुभूतिलाई कला, रस, शैली, शिल्पमा ढालेर रचना गरिनु हो । जसमा देशको यथार्थ कुरा, समाजिक परिवेश, ऐतिहासिक पक्ष, नेपालीको भूगोल, राजनीति अवस्था, लगायतका धेरै कुराहरु बोलिनुपर्छ । जुन कुराले सकारात्मक बाटो देखाओस् । भावनाका बिम्बहरु, भावनाका उद्भास, भावनाका बहर वाटिका बजारमा आएका छन् । अरु दुई किताब तयारीमा छन् ।
३. साहित्यमा विकृति देखिनुको कारण के होला ? यसलाई रोक्न के गर्नुपर्छ ?
– पछिल्लो समयमा प्रसिद्धि कमाउने हिसाबले दौडेको देखिन्छ त्यसका लागि अरुको रचना चोरी गर्ने, साहित्यमा गुट उपगुट तयार गर्ने गरेको देखिन्छ यो महाभयानक संक्रमण हो, विकृति हो । साधनामा लीन नभई एउटा सर्जक स्थापित हुन सक्दैन । स्थापित हुन धेरै कठोर साधना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई रोक्न सबै कलमकर्मी सचेत हुनुपर्छ ।
– डिल्लीबहादुर बुढाथोकी, विगत लामो समयदेखि दुधरासमा व्यवसाय गर्दै आउनुभएका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १७ निवासी बुढाथोकीसंग गरिएको कुराका नीको अंश मालागिरी बहसमा ।
१. व्यवसाय कत्तिको चुनौतीपुर्ण छ ?
– व्यवसाय आफैमा चुनोैतीपूर्ण कार्य हो । कसरी व्यवसायलाई बचाईराख्ने, कसरी ग्राहकहरुलाई आफुतिर केन्द्रित गर्ने, धेरै कुराहरुको बारेमा सोच्नुपर्छ यसले गर्दा पनि व्यवसाय चुनोैतिपूर्ण बन्दै गईरहेको छ ।
२. व्यवसायको मुख्य उद्देश्य के हो ? व्यवसायलाई माथि उठाउन के गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ ?
– व्यवसायको मुख्य उद्देश्य भनेको ग्राहकहरुको मागअनुसार उनीहरुलाई सेवा दिनु हो। जस्तो माग हुन्छ उस्तै पुर्ती गरिदिनु व्यवसायको धर्म पनि हो । धेरै उद्देश्यहरुलाई बोकेर व्यवसाय चल्दै र चलाउदै आएका छौ हामी व्यवसायीहरुले । व्यवसायलाई माथि उठाउनका लागि बजारमा माग अनुसार पुर्ती सहज हुनुपर्यो । प्रतिस्पर्धात्मक युग छ कुन किसिमको सामानमा कति फाईदा हुन्छ र बजारको माग के हो त्यो बुझियो भने व्यवसाय केही माथि उठ्न सक्छ होला ।
३. व्यवसायमा अहिले प्रतिस्पर्धा छ भन्छन् के भन्नुहुन्छ ? यसले कस्तो असर गर्छ ?
– साँच्चिकै अहिले व्यवसायमा निकै प्रतिस्पर्धा रहेको छ । मैले फेन्सी गर्दा यो दुधरास भरि कतै फेन्सी पसलहरु थिएनन् अहिले धेरै पसलहरु छन् । हुन त माग अनुसारको पसल हुनु भनेको राम्रो हो तर मेरो अगाडि फेन्सी छ अर्काेले पनि त्यहीँ ठाउँमा फेन्सी गर्नाले बजारीकरणमा असर पुगेको कसैलाई थाहा छैन् । भिन्नभिन्न किसिममा व्यवसाय भयो भने बजारमा मान्छेहरूको आवतजावत बढ्छ अनि बजार पनि सुन्दर देखिन्छ ।
– अञ्जली केसी, लामो समयदेखि डान्सिङ क्षेत्रमा काम गर्दै र विभिन्न कभर भिडियोमा अभिनय गर्दै आउनुभएकी नव मोडेल तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १७ नि वासी केसीसँग गरिएको कुराकानीको अंश मालागिरी बहसमा ।
१. किन मोडलिङ नेै रोज्नुभयो? यही क्षेत्रमा अघि बढ्न सकिएला त ?
– सानैदेखि नाच्ने भनेपछि हुरुक्क हुने गर्थे स्कुलका दिनहरुमा पनि धेरै नाचियो अहिले कलेजमा पनि हरेक कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुती दिईरहेको छु । मेरो रुचि नै मोडलिङ भएकोले यो क्षेत्र रोजेको हुँ । भर्खरै यो क्षेत्रमा छिरेको छु हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ ।
२. अहिलेसम्म कतिवटा गीतहरुमा मोडलिङ गर्नुभयो? कति आउने तयारीमा छन् ?
– अहिलेसम्म त्यति धेरै त गरेको छैन भर्खरै यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छु ३/४ वटा कभर भिडियोहरु युट्युवमा आएका छन् । दर्शकहरुबाट पनि राम्रै प्रतिक्रिया पाएका छु । यहीँ महिना कपिल मणीको तिजको गीतमा मोडलिङ गर्ने अवसर मिलेको छ । अब केही दिनमा उक्त गीत बजारमा पनि आउदैछ । मैले आफ्नो मोडलिङलाई निरन्तरता दिदै जानेछु ।
३. मोडलिङ सिकेर यो क्षेत्रमा आउदा फाईदा कि नसिकेर आउदा फाईदा ?
– अब मोडलिङ नसिकेर पनि धेरै मोडेलहरु बजारमा छाईरहनु भएको छ । तर सकेसम्म सिकेर आउदा धेरै कुराहरुको जानकारी हुन्छ। कसरी आफ्नो प्रस्तुति दिने, कसरी नाच्ने, कसरी अभिनय गर्ने कुरा पहिले नै थाहा पाएपछि भिडियो पनि राम्रो हुने र निर्देशकलाई पनि सजिलो हुन जान्छ । त्यसकारण पनि मोडलिङ सिकेर आउन जरुरी छ । मैले अहिले पनि मोडलिङ सिकिरहेको छु ।
“सरकारी फार्मेसीले बिरामीलाई सहज” – अधिकारी